Liverpool Iyo Tottenham Oo Loo Kala Bedelay Qolalka Labiska Ee Finalka Champions League & Sababta Oo La Sharaxay - Gool24.Net
Liverpool Iyo Tottenham Oo Loo Kala Bedelay Qolalka Labiska Ee Finalka Champions League & Sababta Oo La Sharaxay
Markii labaad taariikhda tartankaan, waxaa finalka Champions League ku tartami doona labo kooxood oo Ingariiska.
Finalka Champions League waxaa uu dhacaya 1da bisha Juun iyadoo lagu qabanayo garoonka Atletioc Madrid ee Wanda Metropolitano.
Markii la sameynayay isku aadka wareega sideed dhamaadka waxaa sidoo kale la sii sheegay kooxda ay guri u noqoneyso garoonka finalka, waxaana ay noqotay Tottenham halka Liverpool ay marti ka noqon doonto garoonka Wanda Metropolitano.
Waa muhim in la go’aansado kooxda ay guriga ay u noqoneyso sababtoo ah waxa ay helayaan qolka labiska ee ugu fiican iyo sidoo kale inay ku ciyaari karaan maaliyadooda rasmi ah haddii lacala ay isku ekaadaan labada maaliyadood.
Inkastoo Tottenham ay aheyd inay noqoto kooxda guriga (home team) laakiin hadana maamulaha garoonka Fernando Fariza ayaa u sheega Sky Sports News inay ku qasbanaadeen inay qolalka labiska u kala bedelaan labada kooxood.
Sababtuna waxa ay tahay in taageerayaasha Tottenham ee gaaraya 16,613 inay fariisan doonaan dhanka waqooyi ee garoonka halkaasoo uu ku yaalo qolka labiska ee martida.
Sidaasi darteed waxay Tottenham isticmaali doontaa qolka labiska ee martida halka Liverpool ay isticmaali doonto qolka labiska ee minanka.
Garoomada casriga ah qolka labiska ee kooxda martida loo yahay aad ayuu uga fiican yahay qolka labiska ee martida.
Sida aad ka arki karto sawirka kore, garoonka cuub ee Atletico Madrid waxaa la xaqiijiyay in kooxda Atletico ay hesho qol labis oo raaxo badan aadna u weyn, waxaana finalka degi doonta Liverpool.
Sawirka hoosena waa qolka labiska martida ee isla garoonka Wanda Metropolitano oo ay Tottenham degi doonto.